विश्वकप अन्तिम १६ मा को को? कस्ले जित्ला ?
फ्रान्स र अर्जेन्टिना ३० जुनमा ( १६ गते शनिबार ) यी दुई देश काजन एरिनामा भिड्दै छन् । खेल सुरु बेलुका ७:४५ मा हुनेछ ।
रेड कार्डका पांच् प्रश्न: रेड कार्ड खाएपछी खेलाडिले कति पैसा तिर्नु पर्छ?
यहाँ छन रेड कार्ड सम्बन्धी पाच् वटा प्रश्न र तिन्का उत्तरहरु । रेड कार्ड दरो प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ र उचित हेरचाह पुग्यो भने एक दशकसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्को लम्बाइ चार इन्च र चौडाइ ३ इन्च हुन्छ । गोलकिपरले रेड कार्ड पायो भने के हुन्छ?
होटलको नसिधिएको साबुन के गरिन्छ?
तपाईं कतै जाँदा पक्कै पनि धेरैपटक होटलमा बास बस्नु भएको छ । होटल वालाले हस्पिटालिटी देखाउन प्रत्येक रुममा कम्तिमा एउटा सबुन र 'क्रिस्पी' टावेल राखिदिएको हुन्छ । एक रात तपाईं उक्त होटलमा बस्नु भयो भने एकपटक वा दुईपपटक नुहाउनु हुन्छ । त्यो साबुन पुरै सिधिएको हुँदैन । प्राय ती साबुन तेही साबुन राख्ने स्टिलको तखतमा उत्तिकै राखिदिएर हामी हिँड्छौ । वास्तवमा हामीलाई ख्याल पनि हुँदैन त्यो । तर कहिल्यै हामीले सोचेका छौं त? ती साबुन कहाँ जान्छ? वा तीनलाई के गरिन्छ? पक्कै पनि नयाँ क्लाइन्टलाई प्रयोग गरिएको साबुन दिइँदैन । बट्टा नखोलिएको नयाँ नै दिइन्छ । अझ कतिपय होटलले खेर जाने भएर निकै सानो साइजका साबुन राखिदिएका हुन्छन् । जतिसुकै सानो भएनी त्यो पुरै खपत हुँदैन । बाँकी त रहन्छ नै ।
गत २५ गते शुक्रबार मध्यराततिर सोसल मिडियाका पानाहरु एउटा अप्रीय समाचारले भरियो । पित्त नलीको टर्मिनल क्यान्सरले थलिएका वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा उपेन्द्र देवकोटाको मृत्युको खबर थियो त्यो । सोसल साइटहरुमा बुझ न सुझ कमेन्ट र सेयर गरेर पोस्टहरुलाई सुपरहिट बनाउने छुट्टै किसिमको झुण्ड छ । यस्ता झुन्डहरुले कुनै समय राष्ट्रकवी माधव घिमिरेलाई पनि अकालमा मृत्युवरण गराएका थिए । यसपटक देवकोटालाई गराए ।
श्री तलब महोदय, एक तलबजिवी तलबपीडित कर्मचारीको न्यानो अविभादन् स्विकार । इच्छा, आकांक्षा निरन्तर बेलुन जसरी फुल्दै छ, महंगीको चरमचुलीले सगरमाथा छेक्न आँटिसक्यो, तर तिम्रो साइज ज्युँ का त्युं उस्तै छ । अलिकति भएपनि साइज बढाउछौं कि भनी एक बर्ष कुरियो । जेठ् पन्ध्रमा बजेट भाषण पनि आयो । हिस्स बुढी हरिया दाँत भो । बजेटमा तिम्रो शत्रु (कर) को बरु निकै हाली मुहाली देखिन्छ । तिम्रो आफ्नो आकार भने कम्तिमा एक बर्षको लागि पुनः उहि रहने निश्चित भयो । तिम्रो यसपाली नबढ्ने निर्णयले लाखौँको संख्यामा रहेका म जस्ता मध्यवर्गीय आशामुखीहरु मर्माहत भएका छन् ।
ओली सरकारले ऐतिहासिक सय दिन पार गर्यो । यस् बिचमा धेरै सकारात्मक समाचारहरु आए । थोरै नराम्रा खबरलाई जनताले पचाए । निर्माण साँमाग्रीको बजार भाउ बढे पनि कोही चुक्क बोलेन । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धिको यदाकदा गुनगुन सुँनिदा ओलीले “म सानो छँदा सुन ९० रुपैया तोला थियो" भन्दिए, चरोमुसो बिरोधमा उत्रिएनन् । विश्वासको मतका आधारमा नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कहलिएका ओलीको सरकारले केहि अवश्य गर्नेछ भन्ने आशले कसैले केहिमा बिरोध गर्न चाहेनन् ।